हावामा उड्ने कुरा - परिहास - नेपाल
नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यक्रममा गएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उल्टै निगमलाई गाली गरेछन् । उनले भनेछन् कि हावामा उडिरहनुपर्ने नेपाल वायुसेवा निगमका विमान त जम्मै जमिन ओगटेर पो बसेका रहेछन् । के ताल हो यो ? यदि यी विमानलाई हावामा नउडाउने हो भने सरकारले एक रुपैयाँ पनि अनुदान दिँदैन ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको हावाप्रेम यसबाट पनि झल्किन्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हावाप्रति उनको ठूलो लगाव छ । हावासँग प्रधानमन्त्रीको कति ठूलो लगाव छ भन्ने भाषणबाट पनि थाहा हुन्छ । धेरैले महसुस गरेको पनि हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री कमरेडले भाषण गर्दा हावाका लागि पंखा चलाइरहनु पर्दैन । त्यो त्यहीँ उत्पादन भइरहेको हुन्छ । अहिले देशैभरि गर्मी बढिरहेका बेला पनि काठमाडौँ शितल भएको त्यसै होइन ।
हावाप्रतिको यो प्रेमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निगमको कार्यक्रममा पनि प्रकट गरे । निगमका विमान हावामा नउडेको देखेर उनलाई साह्रै चिन्ता लागेको रहेछ । प्रधानमन्त्री आफू भने हरेक कुरा हावामा उडाउने । निगमचाहिँ हवाईजहाजसमेत हावामा नउडाउने । अनि उनलाई झोक नचले कसलाई चल्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई जहाज मात्र होइन, हरेक कुरा हावामा उडिरहेकै राम्रो लाग्छ । सपना, विकास, निर्माण, समृद्धि, योजना...जम्मै उनलाई हावामा उडिरहेको राम्रो लाग्छ । तर निगम भने हावामै उडाउनुपर्ने कुरासमेत हावामा उडाउँदैन । अनि यस्तो संस्थालाई गाली नगरे के गर्ने ?